Archives Interview - 1aviagem.com
Niresaka momba ny vehivavy Meksikana izahay ary nitondra tolo-kevitra momba ny Corona Virus sy Soso-kevitra momba an'i Meksika! Nihaona tamin'i Érika aho nandritra ny sakafo hariva tao Rio de Janeiro. Ary nanatevin-daharana ny vondrona mpizahatany izahay ary nizara latabatra mitovy ihany izahay. Somary nahagaga ahy i Érika hoe ahoana ny fomba iraisam-pirenena latabatra. Nanana olona izahay ...
Alohan'ny hanombohako dia mila milaza aho fa natao tanteraka tamin'ity resadresaka ity. Tsy nanana fotoana hieritreretana script izahay ary natao herinaratra izany. Amin'ny soso-kevitr'i Lexiegh manokana. Mila zavatra tena izy izy! Ny fomba tsara indrindra hahatratrarana azy dia ny manao toy izao, amin'ny fampiasana telefaona findainao an-tsoratra ary…
Androany dia hahalala bebe kokoa momba ity firenena ity isika - ny vondronosy nantsoina hoe Filipina. Nanomboka tamin'ity dinidinika ity izahay mba hianatra bebe kokoa momba ity firenena ity, izay vondronosy asiana mahafinaritra. Ary tsy misy mahay manazava kely anay momba azy afa-tsy ny Filipino. Izany no antony hiresahako anio amin'ny namako Filipina - Jeff. Nihaona aho ...
hamaky bebe kokoa Inona no hitranga avy any Philippines? Ho an'ny Filipino
Amin'izao androany izao dia hiresaka amin'ny olona isika, farafaharatsiny. Teraka tany Hongria izy, nandalo an'i Shina ary niaina tany Aostralia! Ary vao haingana nitsidika an'i Brezila sy tany Amerika Latinina. Izaho dia miresaka amin'i Chris amin'izao fotoana izao. Nihaona izahay nandritra ny fitsangatsanganana nanomboka tany Finlandy ary nifarana tany Alemaina, nandalo an'i Rosia. I ...
hamaky bebe kokoa Fanadinadinana amin'ny Hongroà - Torohevitra ho an'i Hongria, Aostralia ary Brezila.
Belarosiana ho an'ny mponina Belarosiana
Mankalazà ny olon-drehetra, ka andao isika handinika an'i Belarosia androany. Mba hanaovana izany, tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny fanadihadiana olom-pirenena Belarosiana. Ary izany no nataoko tamin'ity tafatafa ity niaraka tamin'i Kate namako. Nahita izahay rehefa nanao ny dia voalohany aho. Nitsidika an'i Minsk izy ary mpitari-dalana teo an-toerana ...
hamaky bebe kokoa Belarosiana ho an'ny mponina Belarosiana
Fanadinadinana: Ahoana ny amin'i Kanada? by a Canadian
Androany dia hiresaka bebe kokoa momba an'i Kanada ity firenena goavana any Amerika Avaratra ity. Amin'ity indray mitoraka ity dia misy olona kanadianina. Ahoana no ahafantarantsika ny tsirairay? Nihaona tamin'i Andy tany Finlande aho nandritra ny diany nanerana an'i Rosia sy ireo firenena mpifanolo-bodirindrina. Izy no mpiara-mitory tamiko nandritra ny dia. Ary mifandray amin'ny tambajotra izahay ...
hamaky bebe kokoa Fanadinadinana: Ahoana ny amin'i Kanada? by a Canadian
Peroa noho ny fahitan'ny Peroviana iray sy ny fahitan'ny mpizaha tany iray
Tena mahafa-po ahy ny mamoaka ity lahatsoratra ity ho anao. Heveriko fa ity no lahatsoratra tsara indrindra amin'ity blaogy ity hatramin'izao. Tena matotra! Voalohany, 1aviagemNy votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa Mba hanamora kokoa ny olona izay mamaky hahafantatra hoe iza no miteny ...
hamaky bebe kokoa Peroa noho ny fahitan'ny Peroviana iray sy ny fahitan'ny mpizaha tany iray
Kolombia ho an'ny Kolombiana
Fanadinadinana amin'ny Kolombiana, Anio dia nanomboka saripika vaovao izahay 1aviagem.com izay manolotra ny firenena amin'ny fomba fijery ny teratany. manomboka amin'i Kolombià. Niresadresaka tamin'i Felipe Rivera, namako aho. Nihaona tany amin'ny sekoly fianarana diplaoman'i Brezila izahay. Tonga tany Brezila izy mba hianatra. Raha ny marina, dia nianatra haingana haingana izy miteny Portigey, ...
hamaky bebe kokoa Kolombia ho an'ny Kolombiana
Nitsidika ny Firenena Mikambana 36 (17.61%) aho tamin'ny totalin'ny 193.